Kwaa taa maka ihe ị chọrọ echi. - Lorii Myers - na-ekwu okwu Pedia
Kwaa taa maka ihe ị chọrọ echi. - Lorii Myers
Agbanyeghị na ndụ enweghị atụ na ọ dị mkpa ka anyị jikere maka ọdịnihu. Anyị niile nwere ụfọdụ agụụ na ihe mgbaru ọsọ anyị chọrọ iru na ndụ. Ka nrọ ndị a mezuo, ọ dị mkpa ka anyị mee atụmatụ maka ya. Onweghi oge ma obu ebe ziri ezi iji bido izo ya.
Na-echeta mgbe niile na ịrụsi ọrụ ike na inwe uche ga-akacha gị mmiri. Ọ dị ezigbo mkpa ịhazi omume gị ka i wee nweta ihe ị chọrọ ma nwee afọ ojuju na ndụ. A ga-enwe ihe mgbochi na ọbụnadị mgbanwe etu ị nwere ike isi mee atụmatụ njem gị. Mana ọ dị mkpa na ị dị njikere ịnagide nsogbu ndị ahụ.
Ikwesiri iguzogide ndu dika o na abiarute gi, ma odi nkpa inogide n’onodu ndi ahu. Ikwesiri icho uzo ozo ka inagide mgbanwe ahu ma nweta ihe ichoro n'abia.
Nwekwara ike iche na ihe ị kpara n’oge gara aga adịghị anya gị. Mara onwe gị. Ọ bụrụ n ’ị ka na-eche na ịchọtala ihe ọhụụ na ịchọrọ ịchọrọ ị ga - eme atụmatụ maka ya otu a.
Gbalịsie ike na-arụ ọrụ gị niile, ruo mgbe ị ga-eche na afọ juru gị. Ọ bụghị ihe niile ịchọrọ ga-adị mfe, yabụ ịkwesịrị ịkwado maka ya. Ikwenyela ya. Will ga - achọ nkwado mana cheta onye na - akwado ya siri ike maka onwe gị.
Ọ dịghị onye ga-anọnyechite gị ihe ị ga-eme. Yabụ mgbe tụkwasịnụ ntụkwasị obi na onwe gị ma gaa n'ihu. Ghọpụta ihe ị chọrọ ma gbalịsie ike maka ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ mgbanwe ọ bụla na ọha mmadụ malitere ya n'onwe gị. Echela ka onye ọ bụla gosipụta n’echiche gị ma ọ bụrụ na i chere na ọ na-amị mkpụrụ. Ọ bụrụ n’eme ihe ọma, ị ga-ahụ mmetụta ya n’oge na-adịghị anya.
Ezi okwu oma ndi oma taa
Ntughari uche nke taa
Kpoo onwe gi Quotes
Quoting Insparing Short